အိန္ဒိယရှိအကောင်းဆုံးကြွေထည်များကုန်ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ | Freedom Ceramic
မှကြိုဆိုပါသည် Freedom Ceramic Pvt. Ltd
Freedom Ceramic Pvt. Ltd. အိန္ဒိယရှိထိပ်တန်းကြွေအုပ်ထိန်းကိရိယာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏0န်ဆောင်မှုခံယူသူများသည်အကောင်းဆုံးကိုရွေးချယ်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ပလာတတ်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိသည်. ကျွန်ုပ်တို့၏ကြွေပြားများစုဆောင်းခြင်းသည်ကြွေထည် 300 x 600 မီလီမီတာ, 600 x 1200 မီလီမီတာ, 600 x 600 မီလီမီတာ, 600 x 1200 မီလီမီတာ, 600 x 1200 မီလီမီတာ,. ကျွန်ုပ်တို့၏အုပ်ကြွပ်များသည်အစွန်းရောက်ခံနိုင်ရည်နှင့်ကြာရှည်ခံသည်. မြင့်မားသောကြာရှည်ခံခြင်းသည်ကန့်သတ်ချက်များနှင့်ပျက်စီးမှုကိုနည်းပါးစေပြီးသက်တမ်းတိုးရန်လည်းလျော့နည်းစေသည်.
ကျွန်ုပ်တို့၏ catalog ကို PDF format ဖြင့်ကူးယူနိုင်သည်. ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်စုဆောင်းမှုအကြောင်းပိုမိုသိရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ e-catalog ကိုစစ်ဆေးပါ. ကျွန်ုပ်တို့၏ကတ်တလောက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြွေပြားများ၏အရည်အသွေးနှင့်ကြာရှည်ခံမှုကိုရှင်းပြသည်.
ကုန်ပစ္စည်းထုပ်ပိုးအသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုသင်စစ်ဆေးနိုင်သည်။ ၎င်းတွင်အရွယ်အစား, အထူ, အကျယ်အ0န်း,.
အရှည်, အကျယ်နှင့်ထုတ်ကုန်အရွယ်အစားရိုက်ထည့်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကြွေပြားများဂဏန်းတွက်စက်သည်လိုအပ်သောကြွေပြားများနှင့်လိုအပ်သောကြွေပြားသေတ္တာများနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးလိမ့်မည်.
Freedom Ceramic Pvt. Ltd. ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများ, ဒီဇိုင်းများနှင့်ပုံစံများ၏ကွဲပြားခြားနားသောကြွေပြားများနှင့်အဆိပ်အတောက်ပြားများကိုထုတ်လုပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကြွေပြားများစုဆောင်းခြင်းပါဝင်သည် :
တွင် Freedom Ceramic Pvt.Ltd ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားအတန်းအရည်အသွေးဖြင့်အကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ရန်အမြဲတမ်းကြိုးစားသည်. ငါတို့စက်ရုံမှလာသည့် tile တစ်ခုချင်းစီသည်လက်ရာကိုယ်နှိုက်ဖြစ်သည်ကိုသေချာအောင်လုပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များမှာကြွေထည်များနှင့်အတူ 300 x 600 မီလီမီတာ, 600 x 1200 မီလီမီတာ, 600 x 600 မီလီမီတာ, 600 x 1200 မီလီမီတာ, 600 x 1200 မီလီမီတာ, 600 x 1200 မီလီမီတာ,. ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတွင်အရောင်းအ0ယ် 113 ခုကျော်ရှိပြီးဖြန့်ဖြူးသူများတစ်နိုင်ငံလုံးပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကို Mauritius, တောင်အာဖရိက, တောင်ကိုရီးယား, တောင်ကိုရီးယား, ဘော့ဆွာနာ,.